Mobile App Protection. Sei Chichikosha Kwazvo Kubhizimisi Rako? - Semalt Anoziva Mhinduro
Alexander Peresunko, the Semalt Mutungamiri Akabudirira Mutengi, achakuratidzira pane imwe nzira yechokwadi-yekuti nei zvichikosha kuchengetedza mapurogiramu efoni yako kubva pakurwiswa neBob uye scrapers.
Makambani akasiyana-siyana anopa mafambisirwo eNhare yekutanga yebhizimisi urongwa hwokufananidza ruzivo rwevashandi vavo vemunyika yose uye vemunharaunda. Myntra ndiyo inonyanya kufanana neIndia uye imwe yezvinyorwa zvepafashoni zvakanyanya paIndaneti - by poppy. Ndiyo yekutanga yakashandura pakushandisa shanduro yeApp chete, iyo inoti ndiyo yakanakisisa pamusoro pekutengesa uye mabasa. Zvechokwadi, iwe unogona zvakare kushandisa bhizimisi iri rekuti, asi dzimwe njodzi dzekuchengetedza dzinogara dzichibatanidzwa.
Pane kumwe kusanzwisiswa kwezvinhu zvinofambisa zvese zvakachengetedzwa zvakanyanya kupfuura mawebsite maererano nekudzivirira kubva kuBob, web scraping, uye kudzivirirwa kwehuwandu. Asi patinoongorora tsanangudzo, tinogona kuwana pfungwa yokuti matambudziko mazhinji anowirirana newebsite yako uye mapurogiramu emafoni. Nokudaro, zvinhu zvose zvinoda kudzivirirwa kubva ku scrapers uye bots. Zuva rimwe nerimwe, zvinetso zvakawanda zvinowanikwa pawebsite uye mafoni apps zvinoda kutarisirwa uye kushanda zvakaoma. Kana iwe uchida kupa mhedziso kune bhizinesi rako, saka zvakanakisisa ndezvokuti iwe unobvumira imwe nguva uye kubvisa mabhoti uye scrapers nokukurumidza sezvinobvira.
Mapurogiramu emafoni anorega vashandisi vashandise ruzivo uye data inowanikwa kuburikidza nemhando dzakasiyana siyana dzewebhu..Aya mawebhisi webhutaneti uye data avo vari pangozi yekuchera. Nzvimbo yehutachiwana yako inogona kubiwa nekuda kwezvinangwa zvakasiyana nemazvikwata zvinonzi bots. Kana iwe uchida kuvabvisa, iwe unofanirwa kudzivirira ma IP aderesi sezvo ndiyo nzira iri nyore uye yakanakisisa yekudzivirira kuuya kwebhodhi.
Hazvingave zvisina kunaka kutaura kuti dambudziko rebhoti nderimwe rematambudziko makuru ekufambisa uye mawebsite. Makambani anorasikirwa nehuwandu hwemashoko uye ruzivo ruzivo rwekutsvaga paIndaneti nekuda kwei bots Vanokwidza kuburikidza nekukumbira kwakawanda kubata kana kudhinda deta yako, zvichiita kuti spamming yezvibvumirano zvinoita kune vakasiyana-siyana vashandisi chaivo nevatengi.
Mabhoti Anoita Sei Pamusoro Pemabhizimisi Ako
Maitiro anozivikanwa seTinder na Snapchat vave vachirwisana neipi yakaipa kwemwedzi inoverengeka. Vanonzi vanokanganisa kuonekwa nekuvimbika kwebhizimisi ravo, zvichikonzera kusagadzikana kune vatengi nevashandisi zvakanyanya. Kakawanda munguva pfupi yapfuura, nharo pakati peMyntra neimwe ikambani isina kutumidzwa yakashumwa. Uyu wekupedzisira akakwanisa kutakura maInstra's apps uye zvinyorwa pane mawebsite akasiyana siyana uye domains. Icho chakaita kuti kambani ivhare mishando yayo yakawanda nokuti vatengi vakamira kuvimba neMyntra nemishonga yayo. Vaifunga kuti iyo isiri yepamutemo desktop version uye yakatanga kuibvisa kubva kumitambo yavo. Njodzi dzaive dzakakosha panyaya iyi, uye mibvunzo yakawanda yakauya mupfungwa dzedu. Imwe yemibvunzo iyi ndeyega mapurogiramu ose kana bhizimisi inoda kudzivirirwa kubva kumabhai kana kwete?
Kuchengetedza Mobile App API
Zvakakosha zvikuru kumabhizimisi e-app-based kuti vakachengetedze ma apps avo efoni uye zvinhu zvavo kubva kubhodhi. Vaizofanira kushandisa zvakanakisisa kuchengetedza zvigaro izvo zvinogona kuchengetedza dheta ravo uye web services kubva kune malware uye bots. Haisi basa rakanyanya uye rinogona kutora nguva yako yakawanda nekuedza. Kunyange iyo antivirus software uye anti-malware zvishandiso hazvina chazvinobatsira sezvo dzisingavimbisi zvavanoda.